Tareennada Gawaarida Jaban | RayHaber | raillynews
9,1 bilyan ilo ayaa loo qoondeeyay barnaamijka maalgashiga 2020 ee Mashruuca Konya Metro ee 1,2 bilyan TL. 7 milyan oo ah lacagta loo yaqaan TL ayaa sidoo kale loo haystay 148,7 gaari oo magaalada kuyaala oo loogu iibinayo xaafadaha Konya. 2020 [More ...]
Mashruuca Gaziray, oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee gaadiidka Gaziantep, guryaha qaar ee Toprakkale - Bahçe, Nurdağ - Başpınar - Gaziantep - Khadadka Tareenka Mustafayavuz waxaa daadgureeyay shirkadda TCDD. [More ...]
Şanlıurfa, oo la yimid dhibaatada taraafikada joogtada ah, ayaa la yaabay howlaha socda ee socda ee ka socda Gaziantep. Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin ayaa sheegtay inay xaliyeen dhibaatooyinkooda gaadiid muddo sannado ah. [More ...]
Deynta ay bixiso Bangiga Horumarinta Islaamka, 4 qandaraas ayaa lagu qaban doonaa Mashruuca Dawlada Hoose ee Magaalada Gaziantep Gaziray. 8 wadarta ah oo ay la socdaan 4 gaari midkiiba [More ...]
Joojinta Başkentray Özgüneş, oo ay biyo galeen oo loo xiray dayactir kadib roobkii wax ku oolka ahaa ee bishii Juun ee la soo dhaafay, lama isticmaalin 7 bilood. Isagoo sheegay inay cabashadooda ugu gudbiyeen TCDD codsi, dadka deegaanka ayaa sheegay, 7 bilood [More ...]
İzmir wuxuu sanadka cusub la gali doonaa Ozan Doğulu. Riwaayaddu waxay ka bilaabmi doontaa fagaaraha Cumhuriyet saacaddu markay tahay 22.30. Adeegyada gaadiidka dadweynaha ayaa la abaabuli doonaa ilaa sanadka cusub. Dowlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay dhameystirtay diyaar garowgeedii ugu dambeeyay ee dabaaldega sanadka cusub. [More ...]
Ba Surkentray Baadhitaanka Isticmaalka Tareenka ee Bajkrayr ayaa bilaabmay; Dawladda hoose ee Ankara, Sincan-Kayas oo u adeegta inta u dhaxaysa tirada rakaabka ee caasimada ayaa daraasad ku sameysay maalin kasta. Muwaadiniinta degmada, Sincan, Etimesgut iyo Mamak ... [More ...]
Gaziray qaadataa dhulka hoostiisa… Hawlaha ayaa bilaabay; Xarunta Shirka Dhaqanka - Zeytinli Neighborhood, Mujahideen-Budak Neighborhood iyo Isbitaalada-Hotels Area waxay dhaafi doonaan qadka kiloomitir ee 5 ee dhulka hoostiisa ka bilaabmay. Xalka dhibaatada gaadiidka ee Gaziantep [More ...]